Madaxweynaha Waqtigiisa dhamaaday Farmaajo oo kulan la yeeshay Madaxweynaha Congo Félix-Antoine Tshisekedi | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweynaha Waqtigiisa dhamaaday Farmaajo oo kulan la yeeshay Madaxweynaha Congo Félix-Antoine Tshisekedi
Madaxweynaha Waqtigiisa dhamaaday Farmaajo oo kulan la yeeshay Madaxweynaha Congo Félix-Antoine Tshisekedi
Wararka ka imaanaya dalka Congo DR ayaa sheegaya Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo uu la kulamay madaxweynaha dalkaasi Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Kulanka ayaa ahaa mid gaara oo kaliya uu ku wehliyo tarjamaha Madaxweynaha Congo, waxayna Madaxtooyada dalkaasi ay sheegtay in socdaalka Farmaajo lagu qabanqaabiyey codsi isaga ka yimid, isagoo olole ugu jira in la aqoonsado middo kororsiga laga hor yimid ee uu sameystay.
Sidoo kale Wadahadalka Farmajo iyo Tshisekedi oo hadda ah guddoomiyaha Midowga Afrika ayaa warar soo baxay sheegayaan inuu ku saabsan yahay qorshe ay Dowladda Qatar ka danbeyso oo lagu doonayo in taageero loogu raadiyo Maxamed Farmaajo.
Previous articleSafiirkii hore ee Mareykanka oo farmaajo ku tilmaamay shaqsi Mayal adag oo aan Naxariis lahayd.
Next articleXiisad u Faransiiska iyo Islaamiyiinta Pakistan oo ka dhex taagan Dowlada iyo shacabka
Xisbiyada isbahaysiga mucaaradka Somaliland ee Waddani iyo Ucid ayaa shaaciyay magacyada musharaxiinta ay u dhisayaan guddoonka Golaha Wakiillada Somaliland. Labada xisbi ayaa guddoomiyaha Golaha Wakiillada...
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta-gareen oo ciidamo cusub tababar ugu soo...